‘रामकहानी’सँग ‘रोज’को रोचक भिडन्त ! व्यापारिकसँगै प्रतिष्ठाको लडार्इं | Sagarmatha TVSagarmatha TV ‘रामकहानी’सँग ‘रोज’को रोचक भिडन्त ! व्यापारिकसँगै प्रतिष्ठाको लडार्इं | Sagarmatha TV
‘रामकहानी’सँग ‘रोज’को रोचक भिडन्त ! व्यापारिकसँगै प्रतिष्ठाको लडार्इं
काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत शुक्रबारबाट दुई चलचित्र ‘रामकहानी’ र ‘रोज’ प्रदर्शनमा आउँदै छन् । यी दुबै चलचित्र दर्शकका लागि भन्दा पनि निर्देशक तथा चलचित्रका कलाकारका लागि निकै प्रतिक्षित बनेका छन् । सुदर्शन थापाको निर्देशनमा चलचित्र ‘रामकहानी’ निर्माण भएको हो भने निर्देशक निरक पौडेलले रोज निर्माण गरेका हुन् । निर्माण पक्षले आ–आफ्नो चलचित्रले दर्शकको मन जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘रोजी’बाट रोजमा परिणत भएको चलचित्र रामकहानीसँग प्रदर्शनमा आउने भएपछि सिनेवृत्तमा एक किसिमको हलचल नै मच्चिएको छ । यी दुई चलचित्रका विषयमा बजारमा विभिन्न तर्कहरु पनि बाहिर नआएका होइनन् । चलचित्रको छायांकन देखि नै विभिन्न लफडाबाजी परेपछि प्रदर्शनको मुखमा आएर चलचित्रको नाम ‘रोज’ बनाइएको हो । आजको साथी भोलिको दुश्मन हुन कुनै समय लाग्दैन भन्ने वाक्यलाई यी दुई चलचित्रको भिडन्तले केही हदसम्म पुष्टि पनि गरेको छ ।
हुनत, एउटै मितिमा २ चलचित्र आउनु हुँदैन भन्ने चाहि होइन । तर, ‘रामकहानी र रोज’को भिडन्तको भित्री कथा केही फरक पनि छ । निर्देशक सुदर्शन थापासँगको भेटले चलचित्र ‘रोज’का नायक प्रदीप खड्काको करिअरको कोशेढुंगा सावित बनेका बन्न पुगेको स्वीकार्नै पर्छ । अहिले प्रदीप सुदर्शन थापाको टिममा नभएर ‘रोज’मा छन् ।
अर्थात् निर्देशक निरक पौडेलको चलचित्रमा । नयाँ भिडन्तको पछाडि नायिका पूजा शर्मा र नायक प्रदिप खड्काको स्टारडमको लडाई पनि अर्को कारण छ । किनकी, पूजा र प्रदिप एउटै चलचित्रबाट स्टार बनेका थिए । अहिलेसम्म पूजाविना प्रदिप पनि चलेका छन् र प्रदिपविना पूजा पनि चलेकी छिन् । तर, सँगको भिडन्तमा कस्ले उछिन्ने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । दुई दिनको व्यापारिक रिपोर्टले छर्लङ्ग हुनेछ ।
त्यतिमात्र नभएर यी दुई चलचित्र सँगै भिड्नुमा दुवै चलचित्रका निर्देशकबीचको ‘इगो’का रुपमा पनि लिइएको छ । निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’ र निरक पौडेलले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘कुसुमे रुमाल २’ एकैदिनमा रिलिज भएका थिए ।
सुदर्शन र निरक दुबैको डेब्यू चलचित्र बक्स अफिसमा भिडेका थिए । जहाँ, सुदर्शनले बाजी मारे र निरक पछारिए । चलचित्र सम्बन्धी नै अध्ययन गरेर नेपाल आएका निरक त्यो भिडन्तमा आफू असफल हुनुको कारण सुदर्शनलाई मान्छन् । किनकी, सुदर्शनले आफ्नो चलचित्र ‘कुसुमे रुमाल २’सँग नजुधाएको भए आफ्नो करिअर अर्को मोडमा पुग्थ्यो भन्ने सोच निरकको हुनसक्छन् । सायद, त्यो दिनको ‘इगो’लाई निरक अहिले बदला लिने दाउमा देखिएको भन्नेहरु पनि चलचित्रवृत्तमा भेटिन्छन् ।
‘मेरो एउटा साथी छ’, ‘प्रेमगीत’ र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ जस्ता हिट चलचित्र दिएका निर्देशक सुदर्शन थापाको ‘रामकहानी’लाई यस बर्षको प्रतिक्षीत चलचित्रको रुपमा लिएको छ । चलचित्रको प्रसार प्रसारकालागि नर्देशक सुदर्शन थापा, नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठ अहिले चलचित्रको प्रचारमा जुटे ।
त्यसोत चलचित्रको प्रदर्शन अगावै प्रचारप्रसारमा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धा देखियो । दुवै टोलीले प्रचार प्रसारलाई आक्रामक बनाए । चलचित्र रामप्यारीले नेपाल आइडल कि प्रतियोगी ‘काउली बुढी’ सन्ध्या बुढाले समेत चलचित्र ‘रामकहानी’ टोलीलाई साथ दिँदा यता रोज टोली भने नेपाल आइडल सिजन–१ का प्रताप दासलाई लिएर मोफसल दौडमा निस्किएको थियो ।
कमेडी लभ स्टोरी जनराको फिल्म ‘रामकहानी’ मा पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा मख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । त्यसो त फिल्म बन्ने घोषणा देखि नै रामकहानी चर्चामा छ । माग्ने बुढाले १० लाख पारिश्रमिक लिएको देखि पूजा र आकाशको प्रेम चर्चाले दर्शकको ध्यान तानिरहेको छ । यता, रोजी हत्या प्रकरणसँग जोडिएर ‘रोज’ चलचित्र पनि चर्चामा रह्यो । उसले चलचित्रको छायांकन ताका विभिन्न अवरोध झेल्नुप¥यो । त्यतिमात्र नभएर ‘प्रेमगीत’ का सिरिज र ‘लिलिबिली’ को सफलतापछि रोजका नायक प्रदीप खड्काको क्रेज निकै बढेको छ ।
महँगो पारिश्रमिक लिएर ‘रोजी’ मा अनुबन्ध भएका प्रदीपले यसमा क्रिमिनलको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । चलचित्रमा नायक प्रदीप रोमान्टिक अवतारदेखि क्रिमिनल लुक्समा देखिएका छन् । चलचित्रमा प्रदीप खड्का सगै कर्मा शाक्य, परमिता एल आर राणा, मिरुना मगर ,रविन्द्र खड्का, प्रकाश श्रेष्ठ, पल्पसा डंगोल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
जसले जे भने पनि दुबै चलचित्रको भिडन्तमा न्याय दिलाउने भने दर्शक नै हुन् भन्ने कुरालाई पहिले निर्माण पक्षले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । किनकी इश्र्या, दुस्मनी, रिस–रागले चलचित्र चल्ने होइन । चलचित्रको व्यापारिक कारोबारले ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने दुबै पक्षले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नेपाली चलचित्रको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा दुस्मनी जस्तै गरी एकै मितिमा प्रदर्शनमा आउनुले पक्कै पनि दुवैका लागि चुनौती छ ।